Android အတွက်အကောင်းဆုံးပြိုင်ကားဂိမ်း ၁၀ မျိုး Androidsis
မင်းသိပြီးသားအတိုင်း Android စကြ ၀ inာတွင်ရွေးချယ်စရာဂိမ်းများစွာရှိသည်။ ရုံပတ်လည်လမ်းလျှောက်ယူပါ Play Store ကို သိရန် ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်ငါတို့တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဂိမ်းကိုရှာရန်ခက်ခဲသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ နှစ်ပေါင်းများစွာလူကြိုက်များမှုများစွာရရှိခဲ့သည့်အမျိုးအစားတစ်ခုမှဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ယူဆောင်လာသည်။
ကျနော်တို့ပြိုင်ကားဂိမ်းအကြောင်းပြောဆို။ ၎င်းသည် Android အမျိုးအစားတွင်လူကြိုက်များသောဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒီအမျိုးအစားကိုတွေ့ရတဲ့အခါတိုင်း။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ အကောင်းဆုံးအချို့ကိုရွေးချယ်ပါ သင်တို့အဘို့ဤအမျိုးအစား၏ဂိမ်းများကို။ သူတို့နဲ့တွေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူသိများသောခေါင်းစဉ်အချို့။ သို့သော်၎င်းသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုသင်ရှာနိုင်သည်ဟူသောအတွေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီစာရင်းမှာဘာဂိမ်းတွေရှိလဲ။
1 မြန်နှုန်းလိုအပ်: အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်
2 ကတ္တရာ 8: Airbone
3 ရီးရဲလ်ပြိုင်ပွဲ 3
4 CSR ပြိုင်ပွဲ 2
5 ကတ္တရာ Xtreme
6 Grand Prix ပုံပြင်
7 GT ပြိုင်ပွဲ2ရီးရဲလ်ကားအတွေ့အကြုံ
8 တောင်တက်တောင်တက်ပြိုင်ပွဲ 2
10 ပူပြင်းတဲ့ဘီး: ဟာ Off လူမျိုး
စာရင်းကိုဖွင့်ပါတယ် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီခေါင်းစဉ်။ Android ဖုန်းများအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့ဗွီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခု။ ဖြစ်နိုင်သည်စျေးကွက်အပေါ် quintessential ပြိုင်ကားဂိမ်း။ ငါတို့ဆီကိုပြောင်းလိုက်တယ် မြေအောက်လမ်းပြိုင်ကားဆားကစ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များဖြစ်သည် ရဲကနေလွတ်မြောက် အချိန်တိုင်း။ အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်ရန်အခြားလေယာဉ်မှူးများနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်ရှိခြင်းအပြင်။
ကြှနျုပျတို့ ... လုပျရမညျ ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိသည် ငါတို့ကားကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်အစိတ်အပိုင်းများကိုအနိုင်ရနိုင်ရန်အတွက်အချိန်မရွေး။ ဒါဟာမီးမောင်းထိုးပြရန်လိုအပ်သည် ကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ် ဂိမ်းရှိတယ်ဆိုတာသေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ကိုဇာတ်လမ်းထဲရောက်အောင်ကူညီနိုင်မှာပါ။ The ဂိမ်း download ကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်ကျနော်တို့အတွင်းပိုင်းဝယ်ယူမှုကိုရှာဖွေပေမယ့်။
ကတ္တရာ 8: Airbone
အခြား Android ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးအောင်မြင်မှု Saga။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးပြိုင်ကားဂိမ်းများကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ နောက်တဖန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံပြင်သရုပ်မှန်နှင့်လှုပ်ရှားမှုပေးသော၎င်း၏အလွန်ကြီးစွာသောဂရပ်ဖစ်မီးမောင်းထိုးပြရမည်ဖြစ်သည်။ အပြင် ကျနော်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်ကားများစွာသောအမျိုးမျိုးစုစုပေါင်း ၆၀ ရှိတယ်။ ထိုတွင်စုစုပေါင်း 60 ဖြစ်ရပ်များ။ ယခုအခါ Hot Wheels ကားများကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
တစ် ဦး အားသာချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မှာမတူညီတဲ့ဂိမ်း mode များရှိသည်သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့် multiplayer mode အပါအဝင်။ The ဒီဂိမ်းကို download လုပ်ပါအခမဲ့ဖြစ်သည်တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ ၀ ယ်ယူမှုများရှိနေသေးသည်။
Asphalt 8 - ပြိုင်ကားဂိမ်း
သံသယမရှိဘဲအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မှတ်သားထိုက်သည်မှာထိုအချက်ပင်ဖြစ်သည် ဂိမ်းထဲမှာကွဲပြားခြားနားသောစမ်းသပ်မှု 2.000 ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာကစားနိုင်ခဲ့တယ်၊ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် c ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကားများဂယက်ထ အမှန်တကယ်ဆားကစ်ပေါ်မှာ။ ဘယ်ဒီဂိမ်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သရုပ်မှန်တိုးပွားစေပါသည်။
ယခု ဂိမ်းထဲမှာရရှိနိုင်ကား 150 ခန့်ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဂိမ်းအဆက်မပြတ် updated ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကားအသစ်များ၊ ဆားကစ်အသစ်များနှင့်စမ်းသပ်မှုအသစ်များအမြဲရှိသည်။ The ဒီဂိမ်းကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်, အခြားဂိမ်းများ၌ရှိသကဲ့သို့, ငါတို့အထဲမှာဝယ်ယူမှုရှာပါ။
CSR Racing ဂိမ်းစီးရီးသည် Android အတွက်အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ CSR ပြိုင်ပွဲ2စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလက်တွေ့ကျသောကားပြိုင်ပွဲဂိမ်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ထုံးစံစူကာအတွက်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှကစားသမားဆန့်ကျင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ "ယှဉ်ပြိုင်LaFerrari၊ McLaren P1 ™၊ Koenigsegg One: 1 နှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်။
En CSR ပြိုင်ပွဲ2ကားများ ၀ ယ်နိုင်သည်၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ မွမ်းမံနိုင်သည်၊ အချို့သူများနှင့်အတူမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုခံစားနိုင်သည် 3D ဂရပ်ဖစ် တကယ။
မူရင်းထုတ်လုပ်သူ၏ဆက်တင်များအပါအ ၀ င်ကားတစ်စီးချင်းစီ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အဆင့်ကိုသင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ သငျသညျပိုပြီးလက်တွေ့ကျကျဘာမှရှာတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ!
CSR ပြိုင်ကား ၂ - ကားပြိုင်ဂိမ်း
ဂုဏ်သတင်း Gameloft မှထုတ်လုပ်သည်။ ကတ္တရာ Xtreme ၎င်းသည်အခမဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်သို့သော်၎င်းသည်ကစားသူများ၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေမည့် In-app ဝယ်ယူမှုများကိုပေးသည်။ ဒီဂိမ်းထဲမှာ သငျသညျစီးနင်းရထားလမ်း၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးမှတဆင့်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင်ကားအမျိုးအစား (၃၅) မျိုးခွဲခြားထားပြီးကားအမျိုးအစား (၇) မျိုးပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကတ္တရာ Xtreme online multiplayer race, အချိန်ကန့်သတ်ချက်အကန့်အသတ်များနှင့်အခြားအရာများကိုပါခံစားနိုင်သည်။
ကတ္တရာ Xtreme: ပြိုင်ပွဲပြိုင်ပွဲ
Grand Prix ပုံပြင်
အကယ်၍ သင်သည်လက်တွေ့ကျသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်သင်၏ဂိမ်းမဟုတ်ပါ။ Kairosoft မှထုတ်လုပ်သောရိုးရှင်းသောနှင့်သာမန်ထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သည့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်လူသိများသောပြိုင်ကားဂိမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ဒီခြင်း simulation ဂိမ်းထဲမှာ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင့်အားယာဉ်မောင်းများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားရန်၊ စပွန်ဆာများရရှိရန်နှင့်ပြိုင်ပွဲများကိုအနိုင်ရရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်.
GT ပြိုင်ပွဲ2ရီးရဲလ်ကားအတွေ့အကြုံ
GT Racing2သည်အခြား Gameloft ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Asphalt စီးရီးကဲ့သို့ရေပန်းစားသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ပြိုင်ပွဲဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ ၃၀ ကျော်မှကား ၇၁ စီး (Mercedes-Benz, Ferrari, Dodge, Nissan, Audi, Ford စသည်ဖြင့်) အပတ်စဉ်စိန်ခေါ်မှုများအပါအဝင်အဖြစ်အပျက် ၁၃၀၀ ကျော်၊ ပုဒ် ၁၃ ပုဒ်တွင်ပြိုင်ဆိုင်ရန်။ မင်းလည်းလုပ်နိုင်တယ် အခြားကစားသမားများနှင့်တပြိုင်နက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်.
GT ပြိုင်ပွဲ 2: ကားဂိမ်း
တောင်တက်တောင်တက်ပြိုင်ပွဲ2အခြေခံသည် Android အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ပြိုင်ကားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် ရောင်စုံဂရပ်ဖစ်နှင့်အလွန်ရိုးရှင်းသောထိန်းချုပ်မှု.
သငျသညျတက်နှင့်တောင်ပေါ်တက်သွားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ဒါဟာတကယ်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူအသံ။ သင်၏မော်တော်ယာဉ်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြုမူလုပ်ဆောင်ရန်ပရိုဂရမ်လုပ်ထားနိုင်သည်။ ပြီးတော့၊ ဒါ့အပြင်၊ အွန်လိုင်း multiplayer mode၊ အောင်မြင်မှုများ၊ နေ့စဉ်အလုပ်များ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခြားအရာများရှိသည်။
ဖျားနာခြင်း နှင့်အတူတစ် ဦး ပြိုင်ကားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် ယှဉ်ပြိုင်ရန်ပတ်ဝန်းကျင်လေးခု, ပြိုင်ကား Modes သာ, ခေါင်းဆောင်ဘုတ်များနှင့်လှည့်ကွက် maneuvers ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်နှေးကွေးသော mode ကို။ ဒါဟာအစရှိပါတယ် အွန်လိုင်း multiplayer mode ထို့အပြင်သင်ပြောခဲ့သည့်အချို့ကဲ့သို့ "ဤမျှလောက်မပြိုင်သော" ဂိမ်းကိုသင်ရှာနေလျှင်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပူပြင်းတဲ့ဘီး: ဟာ Off လူမျိုး
ကျွန်ုပ်တို့သည်မူရင်းဂိမ်းကိုသွားရန် ပို၍ ရိုးရာဂိမ်းများကိုစွန့်လွှတ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလှည့်ဖြစ်သည် ဒဏ္myာရီပူဘီးကားများထဲမှမောင်း။ ကျွန်တော်တို့ဟာတခြားကားတွေပေါ်မှာတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်ပြိုင်ဆိုင်နေကြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ ကားကိုမှောက်လှန်စရာမလိုဘဲ finish ကိုလိုင်းရောက်ရှိပါ။ သင်မြင်ရသည့်အရာသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။
တစ်ခုဖျော်ဖြေမှုများနှင့်အတန်ငယ်အရူးဂိမ်း။ သူ့မှာဂရပ်ဖစ်ကောင်းတွေရှိတယ်၊ ဂိမ်းကပြိုင်ပွဲမှာအချိန်အများကြီးရနိုင်မှာသေချာတယ်။ ဂိမ်းဒေါင်းလုပ်သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဝယ်ယူမှုအပြင်, အတွင်း၌ကြော်ငြာများရှိကွောငျးကိုရှာပါ။
ရေးသားသူ: Hutch ဂိမ်းများ
ဒါ Android အတွက်အကောင်းဆုံးပြိုင်ကားဂိမ်းများကိုရွေးချယ်ခြင်း။ ယနေ့ခေတ်တွင်ခေါင်းစဉ်များစွာရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤဂိမ်းများ၏စစ်ဆင်ရေးသည်အလွန်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်ဂရပ်ဖစ်များသည်၎င်းတို့အများစု၏အဓိကကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်သင့်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးပြိုင်ကားဂိမ်း ၁၀ မျိုး